[Ukara] Wondershare SafeEraser (Mac):-adịgide adịgide Ihichapu iPhone Data
Mac iPhone Data nchicha: Best iPhone Nchekwa nchicha ihichapu Personal Information
Ihichapu onwe data on iPhone, iPad na iPod aka na-adịgide adịgide iji gbochie njirimara na-ezu ohi ma doo anya na junk faịlụ.
Ofụri Esịt dakọtara na ọhụrụ iOS 9 / iOS 8.4, iPhone 6s na iPhone 6s Plus
Gbalịa Ọ Free N'ihi Mac OS X 10.6 - 10,11 Buy Ugbu a
Ihichapụ kpam kpam Your Personal Data na SafeEraser maka Mac
Ị nwere ike chọpụtara na mgbe ihichapụ a ozi ederede site na gị iPhone, ọ bụghị ruo mgbe ebighị ebi ozugbo. Kama nke ahụ, mgbe ịchọ na Chakwasa ihie, ọ bụ ka e nwere. Ok, nke a bụ n'ihi ihichapụ a faịlụ naanị ewepu faịlụ site na mbụ na nchekwa ma kpọọ ya "njikere-overwritten". Ọ bụ otu ihe ahụ na ndị ọzọ faịlụ, dị ka photos, akwụkwọ, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, kọntaktị, videos, na ndị ọzọ. Na na ụfọdụ mgbake software, a na-akpọ ehichapụ faịlụ nwere ike gbakee. Wondershare SafeEraser maka Mac na-mepụtara ihichapụ kpam kpam gị onwe onye chebaara data, gụnyere ndị a 'na-ama ehichapụ faịlụ', nchọgharị akụkọ ihe mere, nile di iche iche nke caches na ị na-achọghị onye ọ bụla na-ahụ na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka.
Ngwaọrụ gị na-echekwa a otutu gị onwe data i nwere ike chọpụtara, dị ka akụkọ ihe mere eme search, nchọgharị akụkọ ihe mere eme, ehichapụ data, keyboard caches nakwa dị ka ndị ọzọ data ị maara na ha na-mkpa ma ọ bụ mwute: ederede ozi, photos, kọntaktị, na-akpọ ihe mere eme, wdg Wondershare SafeEraser maka Mac ka ị ihichapụ kpam kpam a niile onwe data na ị na-achọghị ọha na eze mara.
Ihichapụ kpam kpam 'Ugbua ehichapụ faịlụ'
Wondershare SafeEraser maka Mac si 'ihichapu ehichapụ faịlụ' ana achi achi ị faịlụ na ị na-ama ehichapụ ga ruo mgbe ebighị ebi. A mma, ị pụrụ ịhụ ihe data ka na-anọgide na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka na ijide n'aka na ndị a na mbụ ehichapụ faịlụ na-aba na ịgụ na recoverable ọbụna na ọrụ software, dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS.
Ọ bụrụ na ị na-ere, trading ma ọ bụ Recycling gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka, mgbe ahụ, Wondershare SafeEraser maka Mac si otu-pịa ihichapu nhọrọ - Ihichapu All Data, nwere ike ime ka gị na ngwaọrụ mma tupu agafe ya. Factory resets bụ nanị ezughị iji wepụ niile nke gị data ma na-eji a ọkachamara data mbibi ana achi achi na ozi gị na jedebere aka gị n'agbanyeghị onye aka ngwaọrụ gị dara n'ime.
Ọcha ratụ ratụ Files & Uninstall ejibeghi égwu
Gị iPhone nwere ole na ole nke nchekwa na ọ na-echekwa a otutu junk faịlụ ị na-adịghị mkpa. Wondershare SafeEraser maka Mac ngwa ngwa-enyocha kwa ya na-ewepụ temp, cache, kuki, ma ghara ịdị irè faịlụ, napụtara gị ọzọ ohere nchekwa. N'ihi ya, na N'ihi ya, ga-mbo mbuli gị iPhone,-eme ka ọ na-agba ọsọ dị ka a ika-ngwaọrụ ọhụrụ.
Ike iṅomi maka ngwa ị na-eji ihe karịrị ụbọchị 30, ikwe gị iwepụ ha ma ọ bụrụ na ị na-n'aka na ị ga mgbe eji ngwa ọzọ. Site na-eme nke a, ọ na-azọpụta gị ọzọ ohere maka ọhụrụ ihe.
Full ekwentị ihichapu / Ugbua ehichapụ faịlụ
Ozi, oku History, Facetime, kọntaktị, Mail, Kalinda, Nchetara, Edeturu, Voice Memos, Safari ibe edokọbara, Photos, Videos, ngwa ọdịnala, System Ntọala, Keyboard Cache, Passbook, iTunes dB, iMessage, Safari ọkacha mmasị, Safari History, oziolu, Apple ID, iCloud ID, Game Center, Apple Maps, Weather, ebuka, ọdụ akwụkwọ akụkọ.
Ozi, iMessage, Ndi ana-akpo, oku History, Facetime, Kalinda, Nchetara, Edeturu, Safari ibe edokọbara, Photos, Videos
Mpikota onu Photos onwe elu Space maka Devices
Photos emeela ukwuu nke gị iPhone ma ọ bụ iPad ohere? The mgbe ụzọ gbapụta nchekwa maka gị iDevice bụ nkwado ndabere na mpaghara photos site na ngwaọrụ gị na kọmputa gị. Otú ọ dị, site n'ime ya, ị nwere ike ghara-ndị a foto na ngwaọrụ gị ele ma ọ bụ ịkọrọ na ndị ọzọ. Ugbu a SafeEraser 'Photo Compressor atụmatụ-enyere gị aka ndabere mbụ foto gị na kọmputa mgbe compressing na mbipụta hapụrụ na gị iPhone, na-azọpụta gị ohere mgbe enyere gị aka ele foto na ngwaọrụ gị kpam kpam. A 2MB foto nwere ike mpikota onu ka 512KB, na-azọpụta 75% nke ohere na mbụ foto enyene. Echegbula onwe gị banyere àgwà nke abịakọrọ foto. Ọ na-ese otu ihe ahụ dị mbụ otu. Ị nwere ike iji tụnyere mbụ foto na abịakọrọ foto >>
Gbalịa SafeEraser maka 15 ụbọchị na-enweta na ike scanning ike na erasing nke music na video si iTunes. N'ihi na arụmọrụ zuru oke ịzụta zuru version.
Gịnị ka "Photo Compressor" na-eme?
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na iOS ngwaọrụ-apụghị ejikọrọ ọma.
Gịnị na-eme mgbe m na-"ezoro ezo ndabere faịlụ" n'oge erasing usoro?
Olee otú m gbanyụọ "Chọta m ngwaọrụ".